I-Samsung Galaxy Note FE ifumana uhlaziyo kwi-Android Pie | I-Androidsis
Ikhutshwe ngoJulayi 2017, i I-Samsung Galaxy Note FE ndinomsebenzi onzima wokulungisa igama leSamsung emva kwayo yonke intlekele Galaxy Note 7.
Ngelixa iifayile ze Qaphela iintsuku ezi-7 zokuqhuma Umkile, iSamsung ayilibalanga abasebenzisi beGalaxy Note FE kwaye, ukungqina, iphumehle nyusela kwi I-Android 9.0 Pie nge-OneUI ngaphezulu kwesi sixhobo.
Ngelixa kungothusi, le ntshukumo iyangqina ukuba i-Samsung iyakwazi ukuxhasa izixhobo zayo. premium ngaphezulu kweminyaka emibini. I-Galaxy Note FE yathunyelwa ngenqanawa nge-Android 7.1.1 Nougat kwaye iya kuphawula uhlaziyo lwesibini lwenkqubo yokusebenza kumjikelo wobomi olandelayo.
I-Samsung Galaxy Note FE ifumana iPie ye-Android
Njengesikhumbuzo, I-smartphone ibonakalisa uyilo olufanayo kunye nezinto ezichaziweyo njengeGlass yeNqaku elingalunganga, ngumahluko ophambili kumthamo webhetri, owancitshiswayo waya kwi-3,200 mAh. Ezinye izinto ezibalaseleyo yi-5.7-intshi ye-diagonal SuperHDOL QHD yesikrini, ikhamera ye-12 MP ngasemva egxile kwi-OIS kunye ne-Exynos 8890 chipset engaphakathi ezisibhozo.
[Ividiyo] YOYIKEKA !! Ukutsha kweemoto eFlorida ngenxa ye-Samsung Galaxy Note 7
Kuhleli kubonakala ukuba i-terminal iyakuphatha njani i-firmware entshakodwa, ukugweba kubuchule bayo obomeleleyo, akufuneki kubekho ngxaki ekuqhubeni le. Uhlaziyo ngoku lukhutshwa eSaudi Arabia nakwiminye imimandla kulindeleke ukuba ifumane uhlaziyo kungekudala.
Njengesiqhelo, Isasazeka nge-OTA. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba uyakuyifumana kwiiyure ezimbalwa okanye kwiintsuku ezimbalwa ezizayo kwingingqi yakho. Ukufikelela kuyo, ukuba isaziso sokuba ifikile kwiselfowuni ayiveli, yiya kwicandelo lesoftware kwifowuni kuqwalaselo okanye kwimenyu yokuseta. Ukuyifaka, sicebisa ukunxibelelana nenethiwekhi ye-Wi-Fi ezinzileyo, ukunciphisa ixesha lokukhuphela kunye nenkqubo yokufaka kunye nokuphepha ukutshaja idatha ephathekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy Note FE ifumana uhlaziyo kwiPie ye-Android
Ezo zilwanyana ziphambeneyo ziphosa iibhanana kwiCritter Clash kwi-Intanethi yabadlali abaninzi